Global Voices teny Malagasy » Hetsika manoloana ny masoivoho Tseky ao Makedonia Avaratra manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra atao amin’ny Roma sy ny herisetra ataon’ny polisy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Jolay 2021 4:35 GMT 1	 · Mpanoratra Metamorphosis Foundation Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Repoblika Tseky, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
“Mamono ny fanavakavaham-bolonkoditra! Te-ho velona ny vahoaka Roma!” sora-baventy tao amin'ny hetsika manohitra ny herisetra ataon'ny polisy sy ny fanavakavaham-bolonkoditra ara-drafitra atao amin'ny Roma, Skopje. Sary : Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA , avy amin'ny tahirin-tsary “Roma Lives Matter.” 
Ny Meta.mk no namoaka  ity tantara ity voalohany. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panovana tamin'ny alàlan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty eo amin'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation.
Notarihan'ny hetsiky ny olom-pirenena AVAJA  , nitaky ny fahamarinana ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mba handraisan'ny governemanta andraikitra manoloana ny famonoana an'i Stanislav Tomaš  , tovolahy Rôma avy any Teplice, Repoblika Tseky, iray amin'ireo tranga farany nisehoan'ny habibiana nataon'ny polisy noho ny fanavakavaham-bolonkoditra ara-drafitra atao amin'ireo Rôma any Eoropa .
“Mamono ny fanavakavaham-bolonkoditra! Te-ho velona ny vahoaka Roma!” sora-baventy tao amin'ny hetsi-panoherana manohitra ny herisetra ataon'ny polisy sy ny fanavakavaham-bolonkoditra ara-drafitra ao Roma, Skopje. Sary : Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA , avy amin'ny tahirin-tsary “Roma Lives Matter.” 
Nitady hanamarina  ny fampiasan-kery tamin'io tranga io ho ara-dalàna ny manampahefana Tseky, tamin'ny filazàna fa natosiky ny fiankinan-doha tamin'ny zava-mahadomelina i Stanislav Tomaš. Etsy ankilany, nilaza ny AVAJA fa ny horonantsary  fisamborana izay niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy dia mampiseho polisy iray nandohalika teo amin'ny hatok'i Tomaš nandritra ny dimy minitra ary niantso fiara mpitatitra marary rehefa hitany fa tsy nihetsika intsony izy.
“Rehefa lasa lalàna ny tsy rariny dia lasa adidy ny fanoherana” sora-baventy tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny herisetra ataon'ny polisy sy ny fanavakavaham-bolonkoditra ara-drafitra atao amin'ny Roma ao Skopje. Sary : Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA , tao amin'ny tahirin-tsary “Roma Lives Matter.” 
Taorian'ny fizarana horonantsary iray  mampiseho ny polisy nidaroka ny olom-pirenena Roma  tao amin'ny tambajotra sosialy dia nambaran'ny Minisiteran'ny Atitany avy hatrany ny fanaovana fanadihadiana anatiny. Nantsoin'ny  Praiminisitra Zoran Zaev ho “mahamenatra” ny tranga, ary nanameloka ity tranga ity ho toy ny ohatra amin'ny fihoaran'ny polisy amin'ny fahefany ny Komity Helsinki miaro ny Zon'olombelona.
Tamin'izay fotoana izay dia nisy horonantsarin'ireo nanatri-maso maro hafa no tafaporitsaka tamin'ny fampitam-baovao . Na izany aza, narahin'ny fampielezana horonantsary manohitra ireo Roma izany tao amin'ny tambajotra sosialy, izay natao hanehoana ny “zava-nitranga rehetra”. Nanambara ny olo-malaza avy amin'ny elatra havanana isankarazany fa “mendrika izany” ireo olona nodarohin'ny polisy satria izy ireo no nanafika voalohany ny polisy.
Naato  tamin'ny asany mandra-piandry ny famotorana azy ireo polisy voarohirohy. Hatreto tsy mbola nisy ny tohiny ara-pitsarana ity raharaha ity.
Salija Bekir niresaka nandritra ny fihetsiketsehana 3 Jona nanoloana ny Masoivohon'i Repoblika Tseky ao Skopje. Sary  avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA , tao amin'ny tahirin-tsary “Roma Lives Matter.” 
Mbola tsaroanay tsara ny herisetra nataon'ny polisy tamin'ny Roma tao Bitola, izay anton-draharahan'ny fitsarana mandeha amin'izao fotoana! Mbola tsaroanay tsara ny fandroahana an-keriny ny Roma  hiala ny fonenany, mbola tsaroanay tsara ny fahafatesan'ny Roma tany am-ponja tamin'ny fomba mampiahiahy! Mbola tsaroanay tsara ny fanavakavahana isan'andro ataon'ny olona sy ny andrimpanjakana amin'ny Roma, toy ny fandrahonana ny ankizy zaza avy any Kočani.
Fihetsiketsehana manohitra ny herisetra ataon'ny polisy sy ny fanavakavaham-bolonkoditra ara-drafitra atao amin'ny Roma manoloana ny Masoivoho Tseky ao Skopje. Sary : Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA , avy amin'ny tahirintsary “Roma Lives Matter.” 
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay, fihetsiketsehana ahitana fitakiana mitovy amin'izany no nitranga tany amin'ny Repoblika Tseky sy tany Romania .
Fihetsiketsehana manohitra ny herisetra ataon'ny polisy sy ny fanavakavaham-bolonkoditra ara-drafitra atao amin'ny Roma manoloana ny Masoivoho Tseky ao Skopje. Sary: Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA , avy amin'ny tahirin-tsary “Roma Lives Matter.” 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/07/09/153280/
 CC BY-NC-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
 “Roma Lives Matter.”: https://www.flickr.com/photos/fosim/albums/72157719544590910/
 hetsiky ny olom-pirenena AVAJA: https://avaja.org/
 Stanislav Tomaš: https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Stanislav_Tom%C3%A1%C5%A1
 ny horonantsary: https://www.aljazeera.com/news/2021/6/29/roma-see-little-hope-as-they-mourn-czech-george-floyd
 horonantsary iray: https://www.youtube.com/watch?v=B0GI90kIKwQ
 dia nisy horonantsarin'ireo nanatri-maso maro hafa no tafaporitsaka tamin'ny fampitam-baovao: https://360stepeni.mk/se-pojavi-novo-video-od-politsiskata-brutalnost-vo-bitola/
 ny fandroahana an-keriny ny Roma: https://mia.mk/ibraimovski-od-pcer-pobara-odgovornost-od-polici-ata-za-slucha-so-romi-ka-zheleznichkata-stanica-vo-skop-e/